गुट उपगुट अन्त्य नगरे जो कसैलाई पनि नछाड्ने युवा विद्यार्थीको चेतावनी ! - गुट उपगुट अन्त्य नगरे जो कसैलाई पनि नछाड्ने युवा विद्यार्थीको चेतावनी !
गुट उपगुट अन्त्य नगरे जो कसैलाई पनि नछाड्ने युवा विद्यार्थीको चेतावनी !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० असार, 09:04:58 AM
वीरगंज । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका युवा विद्यार्थी संगठनले पार्टी पर्सामा देखिएको गुट उपगुट तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थमा गुट उपगुट बनाएर पार्टीलाई वदनाम गर्न तथा कमजोर पार्न खोज्ने जो कसैलाई पनि युवा विद्यार्थीले नछाडने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।
पार्टी भित्र गुट उपगुट र समानान्तर समिति बनाउने कार्यलाई तत्काल त्यागेर एक ढिक्का भई पार्टीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्न पनि आग्रह गरेको छ । राजपाका युवा संघ, विद्यार्थी संघ, युवा दस्ताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय युवासंघका अध्यक्ष शुशिल पटेल, विद्यार्थी संघका मधुसुधन चौरसिया, युवा दस्ताका विष्णु पटेल, भुषाल चौरसिया, अमित यादव, चुनु मिश्र लगायतका युवा विद्यार्थीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्नु अहिलेको प्रमुख लक्ष्य रहेको र त्यसैमा केन्द्रीत रहेर काम गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
२०७५, २० असार, 09:04:58 AM